खवाङमा खानेपानी आयोजना निर्माण - Myagdi Online
खवाङमा खानेपानी आयोजना निर्माण
बेनी २७ पुष । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका २ खवाङमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ । गाउँपालिका अन्तरगत सञ्चालित दोस्रो चरणको पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना मार्फत पा–झिक्नेखोला खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना निर्माण भएको छ । फिनल्याड सरकार र गाउँपालिकाको अनुदान सहयोगमा स्थानीयबासीले श्रमदान गरेर आयोजना निर्माण गरेका हुन् ।
३६ लाख ७० हजार २८ रुपैयाँको कुल लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट ५५ घरधुरी लाभान्वित भएका मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले जानकारी दिनुभयो । खवाङको सामुदायिक विद्यालयमा पनि धारा निर्माण गरेर खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । मिटर जडित निजी धारा निर्माण गरेर घरघरमा खानेपानी वितरण गरिएको हो । यसअघि सार्वजनिक धारा, पँधेरा र मुहानको पानी उपभोग गर्दै आएका खवाङबासीलाई घरघरमा खानेपानी आउन थालेपछि सुबिधा र समयको बचत भएको छ ।
एक वर्षअघि निर्माण सुरु भएको आयोजना सम्पन्न भएपछि बिहीबार उपभोक्ता समितिको आयोजनामा सामाजिक परिक्षण गरिएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु, वडा अध्यक्ष नरबहादुर पुन, परियोजनाका खानेपानी तथा सरसफाई विज्ञ चन्द्रभक्त बिष्ट लगायतको उपस्थितीमा सार्वजनिक परिक्षण गरिएको हो ।
बाँदरजुंगभिरमा भेटिएको शंकासपद बस्तु निष्कृय, प्रेसर कुकरमा माटो ! 25 मिनेट अगाडि
बेनपाले एजेण्डाबिनै १५ गते नगरसभा बोलायो4घण्टा अगाडि
मंगलाको सातौँ गाउँसभाः ३५ करोडको बजेट सार्वजनिक, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार प्राथमिकतामा ( फोटो फिचर)4घण्टा अगाडि
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारितः ३४ करोडको ७८ लाखको बजेट प्रस्ताव4घण्टा अगाडि
बेनी नगरपालिकाको गतिरोधबारे म्याग्दीका सामाजिक संघसंस्थाको धारणा बाहिरीयो ! (विज्ञप्तीको पूर्णपाठ)5घण्टा अगाडि